चिनिया अनुदानका सिलिन्डर प्रयोगविहीन | eAdarsha.com
चिनिया अनुदानका सिलिन्डर प्रयोगविहीन
पोखरा । स्याङ्जाका राजनबहादुर गुरुङ आजभोलि अक्सिजन दिने काममै व्यस्त हुन्छन् । सेक्युरिटीको काम गर्ने गुरुङले सेवा अवधिमा ३ वर्ष अक्सिजन सप्लाइमै काम गरेका थिए । ग्यासको काममा अनुभवी भएकै कारण गएको केही दिनदेखि उनको ड्युटी अक्सिजन कन्ट्रोल रुममै छ ।
अक्सिजन रुममा १८ वटा सिलिन्डर छन्, कुन सकिन लाग्यो, कुनमा कति छ, अब कति धान्छ उनलाई कन्ठै छ । सकिन लाग्नेबित्तिकै उनलाई फेर्न हतारो हुन्छ । उनलाई थाहा छ कि, ‘मैलै एकछिन ढिलो गरेँ भने बिरामीको ज्यान जान सक्छ ।’ त्यही कारण पनि उनी निकै चनाखो भएर सिलिन्डरको सुई र सिस्टमको सुई हेरिरहेका हुन्छन् । उनले दैनिक ८ घन्टा काम गर्छन् ।
बिहीबार उनको ड्युटी दिउँसो २ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म थियो । उनको ड्युटी सुरु भएको १ घन्टा नबित्दै भएका जति अक्सिजन सिलिन्डर रित्तिए । उनी आत्तिए, ग्यास फोकल पर्सन विमल बराललाई खबर गरे, आपूर्तिमा भने, ड्राइभरलाई तारन्तर फोन गरे । जोडिराखेको सिलिन्डरको सुई बिस्तारै शून्यमा झ¥यो । अब के गर्ने ? भन्ने पिरलोले उनको होस ठाउँमा रहेन । चिकित्सकले सिलिन्डरको सकिए पनि पाइपलाइनमा भएको अक्सिजनले केही समय धान्छ भनेपछि गुरुङको मन केही शीतल भयो । तर पनि पाइपलाइनमा सकिँदासम्म पनि भरिएको सिलिन्डर आएन भने गाह्रो हुन्छ भन्ने मनमा भुटभुटीचाँहि चलिरह्यो । १०÷१५ मिनेटपछि भरी सिलिन्डर आइपुग्यो उनले जोरजाम गरे । दिउँसोको समस्या हल भयो ।
नेपाल सरकारबाट सहयोग प्राप्त नीला रंगका १६ सिलिन्डर नोजल नमिलेका कारण यतिकै थन्किएका छन्
केही समय ढुक्कसँग सिलिन्डरको सुईमा आँखा लगाइरहे । राति फेरि उही समस्या दोहोरियो । रात परिसकेको थियो, सबैतिर खबर गरे । बिरामीका आफन्त कराउँदै थिए । ग्यास कन्ट्रोल रुमको नजिकै नीला रंगका १६ वटा सिलिन्डर थिए । बिरामी कुरुवाहरुले यो सिलिन्डर जोड्न मिल्दैन भन्ने प्रश्न गरे । गुरुङले सकी नसकी त्यो नीलो सिलिन्डर काँधमा हालेर भित्र लगी फिट गर्न खोजे, मिलेन । पाइप चलाए, ठाकठुक गरे, उनको केही लागेन । आफूहरुले अहिले प्रयोग गर्नेभन्दा नीलो सिलिन्डरको नोजल (रेगुलेटर) सानो भएका कारण नमिलेको उनले बताए । केही बिरामीका कुरुवाले उनलाई कराउन थाले । उनको केही सिप चलेन, उनी नतमस्तक भएर गाली सुनिरहे, हेरिरहे । केही समयमा ग्यास कम्पनीबाट भरी सिलिन्डर आयो र फिटिङ गर्दा ड्युटी सकिएकाले घर गए ।
उनको ड्युटी भोलिपल्ट बिहानै थियो, फेरि अस्पताल आए । अस्पतालमा रुवाबासी थियो । उनले अक्सिजन अभावकै कारण सुत्केरीसहित ६ जनाको मृत्यु भयो भन्ने पनि सुने । त्यो घटनाले उनी निकै दुखी थिए । अस्पतालमा १५ वर्षको कामको दौरानमा यस्तो समस्या अहिलेसम्म झेल्न परेको थिएन । ‘बिहान अक्सिजन नपाएर मान्छे मरेको भन्ने सुनेँ, साह्रै दुख लागेको छ,’ उनले भने, ‘मेरो कारण त होइन नि ग्यास सिलिन्डर नै ढिलो आयो के गर्ने ।’ छेवैमा भएको नीलो सिलिन्डरले काम गरेको भए पनि ग्यासको अभाव नहुने गुरुङ बताउँछन् ।
अक्सिजन अभाव हुन नदिन नेपाल सरकारबाट सहयोग स्वरुप आएको नीलो रंगको सिलिन्डर नोजल नमिलेका कारण यतिकै थन्किएको अस्पतालका निर्देशक प्राडा. भरतबहादुर खत्रीले बताए । अहिले यस्ता सिलिन्डर अस्पतालमा १९ वटा छन् । केही समय अगाडि पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले दिएका ३ वटासहित मन्त्रीकै पहलमा मंगलबार १६ वटा थप भएका हुन् । काठमाडौंको आपूर्तिबाट आएको तर कुन देशको अनुदानको सहयोग भन्ने थाहा नभएको निर्देशक खत्रीले जानकारी दिए । उनले थाहा नभएको बताए पनि सिलिन्डरमा लेखिएको अक्षरले प्रष्ट चिनिया अनुदान सहयोग भन्ने बुझिन्छ । ग्यास पठाउनेले सँगै नोजल पनि पठाएको भए सहज हुने १ चिकित्सकले बताए । निर्देशक खत्री भने नोजल खोजिहेको बताउँछन् । ‘ग्यास कम्पनीमा त्यसमा लाग्ने नोजल छैन रे,’ उनले भने, ‘बजारबाट नोजल खोजेर पठाएपछि हामीले फिट गरिदिन्छौं भन्नुभएको छ ।’